नेपाल आज | महिलाले मेकअप नगर्दा अरुको अपमान हुन्छ ?
महिलाले मेकअप नगर्दा अरुको अपमान हुन्छ ?
सोमबार, २५ चैत २०७५ गते प्रकाशित - नेपालआज समाचारदाता
मिस नेपाल २०१९ को अडिसनमा सहभागी अस्मिता महर्जनलाई निर्णायक रचना गुरुङले सोधेको प्रश्न र उनले मेकअप बारे राखेको धारणाले धेरैको ध्यान तानेको छ । सामाजिक सञ्जालमा त भिडियो क्लिप भाइरल भएको छ । अधिकांशले रचनाको आलोचना गरेका छन् । रचनाले मिस नेपालको अडिसनमा मेकअप नगरी आउनु ‘डिसरेस्पेक्ट’ हो भनिन् । मिस नेपालको अडिसनमा भाग लिनेहरुका लागि सम्भवतः मेकअप गरेरै आउनु पर्ने कुनै नियम रहेको विषय बाहिर आएको छैन । तर ब्युटी पेजेन्ट भएका कारण ‘कमन सेन्स’ लगाउँदा पनि यस्तो प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनेले राम्री भएर जानु आम कुरा हुन्छ ।
प्रतिस्पर्धी अस्मिताको सरलता भिडियो फुजेटमा झल्किन्छ । उनी जस्ती थिइन्, त्यस्तैमा गइन् । सुन्दरी प्रतियोगितालाई शारीरिक सुन्दरता हो भन्नेहरुलाई जवाफ दिन आयोजक पक्षधरले भन्दै आएको कुरा हो कि ‘मिस नेपाल प्रतिस्पर्धा आन्तरिक सुन्दरता पनि जाँचिने प्लेटफर्म हो ।’ आन्तरिक सुन्दरता जाँचिने ठाउँ हो भने अस्मिता मेकअप नगरी जाँदा उनलाई घोचपेच गरिरहन आवश्यक हुन्न थियो ।
सभ्य समाजमा कसैको शारीरिक दूर्बलताको मजाक उडाईँदैन । अपांगता भएका व्यक्तिले टेक्ने बैशाखीको टिप्पणी गरिनु हँदैन । अस्मिताले माइनस फाइभको चश्मा लगाउने बताएकी छिन् । माइनस फाइभ भनेको चश्मामा धेरै पावर हो । अर्थात आँखा निकै कमजोर भएको स्थिति हो । माइनस फाइभको लेन्स लगाउनु पर्ने युवतीलाई चश्मा किन लगाएको ? कन्ट्याक्ट लेन्स किन लगाउँदिनौं ? जस्ता प्रश्न उनले गर्छिन् । धेरैलाई चित्त नबुझेको कारण प्रश्न भन्दा पनि सोध्ने शैली हो ।
टेलिभिजनका रियालिटी शोहरुमा जजहरुले युवतीहरुलाई कति मीठो शैलीमा ‘ह्वट आर यु गोइङ टु डु डार्लिङ ?’ भनेर सोधको देखिन्छ । आफ्नी छोरी उमेरकी अस्मितालाई रचनाले तिनै प्रश्न मीठो गरी सोधेको भए नराम्रो हुन्न थियो । रोडिज भन्ने एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम नेपालमा पनि देखाइएको थियो । त्यसमा जजले अडिसनमै हप्काउँदै भन्छन्,‘साले आफूलाई खुब हिरो ठान्छस् हैन ?’ पक्कै पनि रोडिज त होइन होला मिस नेपाल । प्रतियोगीको धैर्यताको परीक्षा लिन यस्ता प्रश्न सोधिएको आयोजकले स्पष्टिकरण दिएको छ ।
मिस वर्ल्डका प्रतिस्पर्धीहरु हेर्दा त्यहाँ सहभागीहरुलाई हेपाहा र छुच्चो शैलीमा परीक्षा लिएको जस्तो लाग्दैन । मिस वर्ल्डका जजहरुको पर्स्न्यालिटीका अगाडि कसैले लघुताभाष गर्नु फरक कुरा हो । नत्र त्यस्ता प्रतिस्पर्धामा अरुको भावनाप्रति ठूलो आदर गरिन्छ ।
जहाँसम्म मेकअपको कुुरा छ, मेकअपले मान्छे राम्रो हुने होइन । राम्रो देखिने मात्रै हो । फेरि राम्रो वा ब्युटिफूल भन्ने कुराको पनि कुनै परिभाषा हुँदैन । १८ जना युवतीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर एकजनालाई सुन्दरी भनिनु नै सुन्दरीको मापदण्ड हो त ? केही महिलावादीहरुले यो पनि भन्छन् कि प्रकृतिले दिएको शरीरको आधारमा कसैलाई सुन्दरी भनिनु र बाँकीलाई कम सुन्दरी भनिनु सम्मानजनक कुरा होइन । सुन्दरी प्रतियोगिताले आन्तरिक प्रतिभा र सुन्दरताको जाँच गर्छ भन्नेहरुका लागि रचनाले उठाएको मेकअपको प्रशंग नै गतिलो जवाफ हो ।
यतिबेला मलाई सुन्दरी प्रतियोगिताका सम्बन्धमा हुने गरेका अन्त्यहीन बहसमा प्रवेश नै गर्नुछैन । मेकअप र सुन्दरताको जहाँसम्म कुरा छ, यो केही अर्थमा महत्वपूर्ण पनि छ । मान्छे राम्रो बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । हेर्दा पनि सुन्दर र ज्ञानविद्यामा पनि सुन्दर । पोषणविज्ञ डा. अरुणा उप्रेतीसँग मैले अन्तर्वार्ता गरेकी छु । उहाँसँग पटक पटक कुराकानी पनि गरेकी छु । उहाँले मान्छे सुन्दर र फिट रहन अपनाउनु पर्ने खानपानका धेरै राम्रा टिप्स दिनु हुन्छ । आफै अप्लाई पनि गर्नु हुन्छ । उहाँ उमेरले ६० वर्ष पुग्नु भयो । तर प्रत्यक्ष भेट्दा उहाँमा युवावस्थाको तेज उत्तिकै पाउँछु ।
सुन्दरता प्राकृतिक तवरबाट प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यसमा अलिकति मेकअप गरेर निखार ल्याउन सकिन्छ ।